Pyan Talai Photo. | www.pyantalai.com
Home » Image » Pyan Talai Photo.
Primer of TALAI
Download View439.84 KB
Download View2.6 MB
// Pyan Talai Youths Center //
ꤕꤟꤛꤢ꤬ꤔ-ꤒꤢ꤬ꤜꤟꤣꤧ꤬ ꤗꤤ꤭ꤡꤢ꤬ꤘꤢꤨ꤭ꤓꤢ꤭ꤔ ꤕꤜꤢꤪꤗꤢꤨ꤬
G-mail ; baanraiyintaleh@gmail.com
Facebook acc ; Baan Rai
1.Pyan Talai literature and culture committee.
꤁꤯ ꤕꤟꤛꤢ꤬ꤔ-ꤒꤢ꤬ꤜꤟꤣꤧ꤬ ꤜꤤ꤬ꤜꤟꤣꤧ꤬ ꤘꤢꤧ ꤓꤢꤨ꤭ꤡꤢ꤬ꤔ-ꤜꤢ꤬ꤔ-ꤊꤜꤣꤪꤒꤢ꤬ꤖꤣꤨ꤯
Pyan Talai lady fashion
ꤕꤟꤛꤢ꤬ꤔ- ꤒꤢ꤬ꤜꤟꤣꤧ꤬ꤗꤟꤣꤨ꤭ ꤊꤟꤣꤨꤞꤢꤪꤟꤣꤧ꤭ꤡꤛꤣꤦ꤬ ꤒꤢ꤬ꤖꤚꤢꤪ꤬ꤗꤤ꤭ ꤢ꤬ꤙꤢꤔ- ꤘꤣꤧ ꤊꤢꤪ꤬ꤜꤟꤣꤪ꤬ ꤡꤣꤪ ꤡꤛꤣꤦ꤬ꤞꤢ꤭ꤔꤢꤦ꤬ꤒꤢ꤬ꤖꤣꤪ꤭ ꤢ꤬ꤜꤤ꤬ ꤒꤢ꤬ꤖꤚꤢꤪ꤬ꤢ꤬ꤕꤢ꤭ ꤒꤢ꤬ꤏꤛꤤ꤯ꤡꤛꤣꤦ꤬ꤕꤜꤟꤣꤧ꤬ ꤔꤢꤦ꤬ꤗꤤ꤭ ꤢ꤬ꤖꤢꤨ꤭ꤗꤟꤣꤩ꤭ꤢ꤬ꤡꤛꤣꤦꤗꤟꤣꤩ꤭ꤘꤣꤧ꤯ꤢ꤬ꤏꤛꤣꤩꤗꤟꤣꤩ꤭ ꤒꤢ꤬ꤗꤟꤣꤦ꤬ꤛꤢ꤭ ꤔꤟꤤ꤬ꤋꤢꤪ꤯ꤡꤛꤣꤪꤊꤢꤪ꤬ ꤔꤢꤦ꤬ꤗꤤ꤭ ꤒꤢ꤬ꤕꤜꤣꤪ꤭ ꤗꤟꤣꤩ꤭ ꤒꤢ꤬ꤗꤒꤣꤦ꤬ꤛꤢ꤭ ꤔꤟꤤ꤬ꤋꤢꤪ꤯ꤟꤣꤧ꤭ꤗꤤ꤭ ꤒꤢ꤬ꤖꤚꤢꤪ꤬ꤜꤤ꤬ ꤘꤣꤧ ꤢ꤬ꤙꤔ- ꤢ꤬ꤕꤜꤣꤧ꤬ꤕꤢ꤭ ꤕꤜꤣꤩ꤬ꤊꤢꤦ꤭꤯ꤊꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤊꤣꤨ ꤢꤪ꤭ꤟꤣꤧ꤬ꤓꤢꤨ꤯ꤤ꤭ꤊꤣꤦꤔꤢꤦ꤬ꤒꤢ꤬ꤖꤣꤪ꤭ꤗꤤ꤭ ꤢ꤬ꤡꤛꤣꤦꤢꤪꤒꤢ꤬ꤖꤚꤢꤪ꤬ ꤢ꤬ꤙꤢꤔ- ꤘꤣꤦꤋꤢꤨ꤭ꤜꤟꤣꤪ꤬ꤋꤛꤢꤦ꤯
Talai Literature and Culture
ꤕꤟꤛꤢ꤬ꤔ-ꤒꤢ꤬ꤜꤟꤣꤧ꤬ ꤜꤤ꤬ꤜꤟꤣꤧ꤬ ꤘꤣꤧ ꤓꤢꤨ꤭ꤡꤢ꤬ꤔ-ꤜꤢ꤬ꤔ-ꤊꤜꤣꤪ
ယင်းတလဲလူမျိုးများသည် ရွာပေါင်း ၆၀ခန့်ရှိသော်လည်းယခုလက်ရှိတွင် ဘောလခဲ၊ ဝမ်အောင်း​ကျေးရွာ နှင့် စလဲလုံကျေးရွာဟူ၍ ရွာ ၃ရွာသာ ကျန်ပါတော့သည်။ ယင်းတလဲလူမျိုးမျာ၏ လူဦး​ရေမှာ စုစုပေါင်း ၃၀၀၀ခန့်ရှိသည်။ယင်းတလဲလူမျိုးများသည် ၄င်းတို့၏ စာပေကို ၂၀၁၄ခုနှစ် ဇွန်နဝါရီလ တွင်စတင်ခဲ့သည်။ အသုံးပြုသော အက္ခရာမှာ ဆရာခူးထဲဘူးဖဲ ထွင်ခဲ့သော အက္ခရာကို အသုံးပြုထားပါသည်။ ယင်းတလဲလူမျိုးများ၏ ဗျည်းအက္ခရာမှာ ၂၃လုံး၊ သရ ၁၅လုံး၊ အသံနိမ့်မြင့် ၃လုံး နှင့် ဗျည်းတွဲ ၅လုံး အသုံးပြုထားပါသည်။ ယင်းတလဲစာပေ ဆရာဖြစ်သင်တန်းကို၂၀၁၆ခုနှစ် မေလ တွင် ပထမအကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းတလဲ အဘိဓါန်မှာ အလုံးပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်ခန့် ရေးထားပြီးဖြစ်သည်။ ဒုတိယအကြိမ် မွမ်းမံသင်တန်းကို ၂၀၁၆ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ထပ်မံပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ꤋꤢ꤬ꤜꤢꤨ ꤟꤢꤧ ꤕꤟꤛꤢ꤬ꤔ-ꤒꤢ꤬ꤜꤟꤣꤧ꤬ ꤔꤢꤦ꤬ ꤘꤣꤨꤢꤪ꤭ ꤆꤀ꤘꤣꤨ꤯ ꤗꤢꤔꤢꤧ ꤋꤢ꤬ꤢꤝꤣꤧ ꤔꤢꤦ꤬ ꤢꤪ꤭ꤊꤣꤧꤒꤢꤦ ꤙꤣꤨꤒꤢ꤬ꤋꤢ,ꤛꤢ꤬ꤣꤪ ꤘꤣꤧ ꤒꤢ꤬ꤜꤟꤣꤧ꤬ ꤘꤣꤨꤘꤢꤨ꤭ꤊꤢꤧ꤭꤯ ꤟꤢꤧꤕꤟꤛꤢ꤬ꤔ-ꤒꤢ꤬ꤜꤟꤣꤧ꤬ ꤗꤤ꤭ꤜꤢꤨꤕꤜꤤ ꤕꤟꤛꤢ꤬ꤔ-ꤢꤪ꤭ ꤃꤀꤀꤀ ꤚꤤ꤯ ꤟꤢꤧ ꤕꤟꤛꤢ꤬ꤔ-ꤒꤢ꤬ꤜꤟꤣꤧ꤬ ꤔꤢꤦ꤬ ꤟꤢꤧ ꤗꤢ꤬ꤓꤢ꤭ꤔ-ꤊꤢꤨ꤬ ꤟꤢꤧ ꤜꤟꤣꤧ꤬ ꤘꤣꤦ꤮ ꤔꤟꤣꤩ꤭ ꤂꤀꤁꤄ ꤔꤣꤩ꤭ ꤜꤢꤓꤢ꤭ꤔ-ꤔꤢꤦ꤬ ꤒꤢ꤬ꤜꤢ꤯ꤟꤢꤧ ꤖꤤꤢꤪ꤭ ꤞꤢ꤬ꤚꤢ꤬ ꤋꤢꤨ꤭ꤓꤢꤧ꤭ꤙꤢꤨ꤭ꤖꤢꤧ꤭ ꤢ꤭ꤔ-ꤚꤣꤧ꤬ꤢꤪ꤭ ꤜꤟꤣꤧ꤬ꤕꤜꤣꤨ꤭ ꤔꤢꤦ꤬꤯ ꤟꤢꤧ ꤕꤟꤛꤢ꤬ꤔ-ꤒꤢ꤬ꤜꤟꤣꤧ꤬ ꤜꤟꤣꤧ꤬ꤕꤜꤣꤨ꤬ꤗꤢꤦ꤬ꤔꤢꤦ꤬ ꤢ꤬ꤢꤪ꤭ ꤂꤃ꤕꤜꤣꤨ꤭꤯ ꤖꤟꤚꤣꤩ꤬ꤊꤢꤧ꤭ ꤁꤅ꤕꤜꤣꤨ꤭꤯ ꤍꤢꤪ꤬ꤡꤟꤢꤨ꤬ ꤍꤢꤪ꤬ꤘꤣꤪ꤭ ꤔꤢꤦ꤬ ꤢ꤬ꤢꤪ꤭ ꤃ ꤕꤜꤣꤨ꤭꤯ ꤜꤟꤣꤧ꤬ꤋꤚꤢꤨ꤬ꤔꤢꤦ꤬ ꤅ ꤕꤜꤣꤨ꤭꤯ ꤟꤢꤧ ꤕꤟꤛꤢ꤬ꤔ-ꤒꤢ꤬ꤜꤟꤣꤧ꤬ ꤜꤢ꤬ꤓꤢꤨꤓꤢ꤭ꤔ-ꤞꤢ꤬ꤚꤢ꤬ ꤞꤢ꤬ꤚꤢ꤬ꤗꤢꤦ꤬ ꤍꤢ ꤟꤢꤧ ꤙꤢꤨ꤭ꤗꤣꤪ ꤜꤢ꤬ꤢ꤭ꤔ-ꤞꤣꤨ ꤢ꤬ꤊꤜꤣꤧꤢ꤬ꤊꤜꤣꤨ ꤘꤣꤦ꤮ ꤂꤀꤁꤆ ꤔꤣꤩ꤭꤯
oneatime we are pyan talai total village have 60. But now they are remain Bawlakhe, Wam Auung and Saleahlong3village. we are pyan talai total 2500 people.